साफ च्याम्पियनसिप उपाधिको लागि आज भारत र माल्दिभ्स भिड्दै
19 Feb 2020 | बुधबार, ७ फागुन, २०७६ | Edition : Nepal | UK | Australia
शनिबार, ३० भदौ, २०७५
काठमाडौं । बंगलादेशमा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधिको लागि आज माल्दिभ्स र भारत भिड्दैछन् । बंगलादेशको ढाकास्थित बंगबन्धु राष्ट्रिय रंगशालामा आज साँझ ७ बजे (नेपाली समयअनुसार) उक्त फाइनल खेल हुनेछ ।
माल्दिभ्सले सेमिफाइनल नेपाललाई ३–० गोलले पराजित गरेको थियो भने भारतले पाकिस्तानलाई ३–१ गोल हराएर फाइनलको यात्रा तय गरेको थियो ।
समूह चरणमा पनि यी दुई टोल आमने सामने भएका थिए । उक्त खेलमा
भारतले माल्दिभ्सलाई २–० गोलअन्तरले पराजित गरेको थियो ।
काठमाडौँ । जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय पाटनका निमित्त कार्यालय प्रमुख इञ्जिनीयर सुरेशराज भट्टलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले एक लाख घुससहित पक्राउ गरेको छ ।
नेपाल कोरोनामुक्त रहेको सन्देश विश्वलाई दिनुपर्ने मन्त्री भट्टराईको भनाई
काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगश भट्टराईले नेपाल कोरोना भाइरस भुक्त रहेको सन्देश विश्वलाई दिनुपर्ने बताएका छन् । चीनबाट उद्धार गरेर ल्याएका १ सय ७५ जनामा कोरोनाको संक्रमण नदेख
हामीसँग स्पष्ट बहुमत छ र हामी हरेक क्षेत्रमा दीर्घकालीन काम गर्दछौँः सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा
राँझा । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले हरेक क्षेत्रमा नयाँ र दीर्घमहत्वका काम गर्दै गएको बताएका छन् । गोरखापत्र प्रकाशनद्वारा बुधबार आयोजित कोहलपुर संस्करणको
काठमाडौँ । ग्यास्ट्रिकले धेरै व्यक्तिलाई सताउँछ । यसबाट कैयौं नेपालीहरु पीडित छन् । हाम्रो खानपानले गर्दा पनि पेटमा ग्यास जम्मा हुने गर्छ । यसको समाधानका लागि कैयौं उपायहरु रहेका छन् । त्यसमध्ये आज एलोभेरा अर्थात घ्युकुमारीको प्रयोगले कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे चर्चा गरौं ।
जुम्ल्याहा बच्चा जन्मिने कारण
बुधबार कस्ता कस्ता काम गरेमा धन लाभ तथा स्वास्थ्य लाभ मिल्छ ?
यी देशमा छन् सबैभन्दा धेरै करोडपतिहरु ?
एजेन्सी । धेरै पैसा कमाउने करोडपतिको सुचीमा आउने सपना आजकल धेरैको आम सपना भएको छ । तर, सबै परिश्रमले करोडपति बनाउँदैन । करोडपति बन्न ठुलै संघर्षको आवश्यक पर्छ ।
इमान्दार पाकिस्तानी चालक !
जब अन्डरवेयर लगाएर ५५ वर्षीय व्यक्ति १६ सय किलोमिटर भागे...
मध्यरातमा घर–घरमा गई घण्टी बजाउँदै भाग्ने व्यक्ति पक्राउ